Nigeria: Sida bariis uu sabab ugu noqday in xudduudo la kala xirto |
Nigeria, oo ka mid ah dalalka Afrika ugu awoodda badan, waxay xuduudeeda xirtay laba bilood ka hor si ay uga hortagto alaabta ganacsiga ee qarsoodiga lagu geliyo – Balse tallaabadaas waxay saameysay ganacsiga dalalka gobolkas oo dhan.
Nigeria waxay aqbaleysaan keliya bariiska dekadaha ka soo gala – halkaas oo boqolkiiba 70% canshuur ah lagu saarayay tan iyo 2013-kii.
Balse dadka kotorobaanka kala gudbiya ayaa ka faa’ideystay in ay fududahay ayna raqiis tahay in bariis la geliyo Nigeria.
Dalka Benin ayaa ka dib ka faa’ideystay sare u kaca soo dejinta bariiska ka yimaadda Thailand oo ah waddanka labaad ee bariiska ugu badan soo saara Caalamka oo dhan.
Waxaa jiray xilli bariiska uu ahaa cuntada madaxda iyo taajiriinta Nigeria oo keli ah, kaas oo la cuni jiray Axaddii oo keli ah. Laakiin hadda waa mid qiimihiisu la goyn karo – sidoo kale dadka jecel bariiska Jollof ayaa ka dhigay Cuntada Qaranka.